ताइवानका लागि अमेरिका र चीनबिच युद्ध !
काठमाडौं । ताइवानका लागि अमेरिका युद्धमा होमिएला ? यो प्रश्न दशकौँसम्म अमूर्त थियो। तर, अहिले यो प्रश्न अति आवश्यक बन्न पुगेको छ।
चिनियाँ वायु सेनाले यही महिना चार दिनको अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी लडाकु विमान ताइवानको हवाई प्रतिरक्षा पहिचान क्षेत्रभित्र पठायो।
सीआईएले भर्खरै नयाँ चाइना मिसन सेन्टर गठनको घोषणा गरेको छ। उसले चीनलाई ‘२१ औँ शताब्दीमा हामीले सामना गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक खतरा’ पनि भनेको छ।
यसको तत्कालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको ताइवानबारे बेइजिङको उदेश्य के छ, त्यो पत्ता लगाउनु हो। टापुका रक्षामन्त्री चिउ कुओ चेङले गतसाता चीन २०२५ सम्ममा ताइवानमाथि आक्रमण गर्न सक्षम हुने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेको परिस्थितिलाई उनले गत ४० वर्षकै सबैभन्दा खतरनाक पनि भनेका छन्।
कुरा हालै रिलिज भएको ब्लकबस्टर फिल्म ‘द ब्याटल एट लेक चाङजिन’मा पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ। फिल्ममा कोरिया युद्धमा चीनले अमेरिकालाई हराएको कथा छ।
अमेरिकामा अहिले ६७ प्रतिशत मानिस चीनप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन्। २०१८ मा सो अनुपात ४६ प्रतिशत मात्र थियो। अगस्ट महिनामा गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा यदि चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्यो भने अमेरिकाले आफ्नो सेना खटाएर सो टापुको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकीहरुको संख्या आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) पुगेको छ। ताइवान युद्धले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरालाई नियाल्ने हो भने यो सर्वेक्षणको नतिजा आश्चर्यजनक छ।
त्यसलाई रोक्न अमेरिका युद्धमा जाला तरु यसको छोटो उत्तर हो– वास्तवमा कसैलाई थाहा छैन। ताइवान युद्धको विषयमा विस्तृत योजना तयार पार्ने जिम्मेवारी बोकेका वासिङ्टन र बेइजिङका सैन्य योजनाकारलाई पनि यसको जवाफ थाहा छैन। सम्भवतः अमेरिकाका ‘कमान्डर इन चिफ’ जो बाइडेनलाई नै थाहा नहोला।
धेरै कुरा त आक्रमणको प्रकृति र त्यो समयको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा भर पर्नेछ।